Punta Cana - गर्न र हेर्नको लागि आवश्यक चीजहरू | निरपेक्ष यात्रा
सुसाना Godoy | | डोमिनिकन गणराज्य
भन्न आवश्यक छैन, पुन्टा काना सबैभन्दा बढी माग गरिएको गन्तव्य हो। किनभने यसको नाम मात्र उल्लेख गर्दा, हामीले समुद्र तटहरू धेरै पर्यटकहरूले खोजेको स्वर्ग हो भन्ने महसुस गर्छौं, तर यो सत्य हो कि घाम, बालुवा र फिरोजा पानीको ती कुनाहरूको आनन्द लिनुका साथै, पुन्टा कानाको यात्राले हामीलाई गर्न र हेर्नको लागि अनन्त चीजहरू छोड्छ। के तपाइँ तिनीहरूलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
सायद तपाईलाई विचार छ यसका केही मनमोहक समुद्र तटहरूको आनन्द लिनुहोस्, र पक्कै पनि यो पुन्टा कानामा बिदाहरू बीचको एक आवश्यक छ।। तर तपाईं छुट्टीको दिनको आनन्द लिइरहनुभएको हुनाले, तपाईंसँग अन्य विकल्पहरू छन् जुन तपाईंले पनि मन पराउनुहुनेछ। यदि तपाइँ कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन भने, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले तपाइँको लागि काम गरेका छौं। तपाईंले पूर्ण रूपमा स्विच गर्नु अघि, एक को लागी रोज्न सम्झनुहोस् उडान प्लस होटल पुन्टा काना। किन? किनभने तपाईं सबै कुरा राम्रोसँग बन्द वा बाँधिएको सुरक्षा र आरामसँग जानुहुन्छ। अब हो, स्वागत छ वा तपाईंको छुट्टीमा स्वागत छ!
1 एक सबै समावेशी छुट्टी प्याकेज संग Punta Cana को आफ्नो यात्रा संगठित
2 पहिलो सिफारिश गरिएको भ्रमण: लस हाइटीस राष्ट्रिय निकुञ्ज
3 Isla Saona को भ्रमण
4 Catalina द्वीप मा डाइभिंग
5 Santo Domingo, सबैभन्दा सांस्कृतिक भ्रमण
6 Punta Cana मा अभ्यास गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो गतिविधिहरु
एक सबै समावेशी छुट्टी प्याकेज संग Punta Cana को आफ्नो यात्रा संगठित
पहिले भन्दा बढी आफैंलाई रमाइलो गर्न सक्षम हुने पहिलो चरण भनेको सबै समावेशी पुन्टा काना छुट्टीको लागि रोज्नु हो। किनभने तब मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीसँग सबै सेवाहरू समावेश गर्ने आवास व्यवस्था छ। त्यसोभए यस तरिकाले, तपाईंले केवल सबै गतिविधिहरूको आनन्द लिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा बढी रुचि छ र आफूलाई अझ आरामको गतिमा जान दिनुहोस्, कहाँ खाने वा कहिले खाने भन्ने चिन्ता नगरी। निस्सन्देह, अन्य अवस्थामा पुन्टा कानाका होटलहरूको बारेमा कुरा गर्दा, हामीले तिनीहरूमा पाउन सक्ने उत्कृष्ट आरामहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। यसको मतलब त्यहाँ दिनहरू हुनेछन् जुन तपाईंलाई बाहिर जान आवश्यक छैन, किनकि तपाईंले चाहेको सबै कुरा पाउनुहुनेछ।
निस्सन्देह, होटेल रिजर्भेसन गर्दा, हामीले उडान प्लस पुन्टा काना होटेलमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सबैभन्दा बढी माग गरिएको विकल्पहरू मध्ये एकको बारेमा पनि सोच्नु पर्छ। एक उत्तम विचार हो किनभने हामी यात्रा छोड्नु अघि दुईवटा महत्त्वपूर्ण चरणहरू पनि बन्द गर्नेछौं। यस तरिकाले, हामी प्रस्तावहरू फेला पार्न सक्छौं जुन सधैं स्वागत हुनेछ।
पहिलो सिफारिश गरिएको भ्रमण: लस हाइटीस राष्ट्रिय निकुञ्ज
हामीले पुन्टा कानाको यात्राको लागि पहिले नै रिजर्भेसन गरिसकेका छौं, त्यसैले एक पटक हामी बसोबास गरिसकेपछि, साहसिक कार्य सुरु हुन्छ। एउटा साहसिक यात्रा जुन पहिलो भ्रमण गर्ने ठाउँहरू मध्ये एकबाट सुरु हुन्छ। यो Samaná को खाडी मा स्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। तपाईंले यस क्षेत्रका सबै रिसोर्टहरूबाट टाढाको क्षेत्रको आनन्द लिनुहुनेछ। यसमा तपाईंले तथाकथित 'मोगोट्स' पत्ता लगाउनुहुनेछ जुन एक प्रकारको उचाइ वा उच्च भूमिहरू हुन् जुन प्रकृतिले बनाएको हो। तपाईं समुद्रबाट आइपुग्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न गुफाहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन यो घर जस्तै ठाउँ, रहस्यले भरिएको तर धेरै सुन्दर छ।
Isla Saona को भ्रमण
यो सबैभन्दा बढी माग गरिएको भ्रमण मध्ये एक हो र यसको कारण यो हो कि यसमा ताडका रूखहरूले भरिएको सुन्दर समुद्र तटहरू छन्, तर त्यति मात्र होइन, तर तिनीहरू कोरल चट्टानहरू पनि छन्। यो अपरिहार्य छ कि पुन्टा कानाका होटलहरूले यसलाई उनीहरूको सबैभन्दा सिफारिस गरिएका प्याकेजहरू वा फुर्सदका क्षणहरूमा एकीकृत गरेको छ। त्यहाँ तपाईंले मानो जुआन भेट्टाउनुहुनेछ, जुन एक धेरै शान्त माछा मार्ने गाउँ हो।, जसले तपाईंलाई जित्नेछ, यसको रंगीन केबिनहरू र कछुवा अभयारण्य बन्नको लागि धन्यवाद।
Catalina द्वीप मा डाइभिंग
तपाईंले भ्रमण गर्न सक्ने अर्को टापुहरू यो हो। 1494 मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले उनको नाम क्याटालिना राखेका थिए। यो सबैभन्दा धेरै पर्यटकीय ठाउँहरू मध्ये एक हो र यसमा तपाईं डाइभिङ जस्ता गतिविधिहरूबाट टाढा जान सक्नुहुन्छ। यस्तो लोकप्रिय क्षेत्रहरूमा यो सधैं केहि धेरै विशिष्ट छ। त्यसोभए, टापुको वरिपरि हिंड्नु पछि, सानो व्यायामको लागि रोज्नु जस्तो केहि छैन। तपाईं प्रकृतिले भरिएको यसको दृश्यहरूको साथ प्रेममा पर्नुहुनेछ।
Santo Domingo, सबैभन्दा सांस्कृतिक भ्रमण
यदि एक दिन तपाईं चाँडै उठ्नुहुन्छ र सांस्कृतिक भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, सान्टो डोमिङ्गो जाने जस्तो केहि छैन। पुन्टा कानाबाट कारबाट करिब तीन घण्टा लाग्छ। तर यो यसको लायक हुनेछ, र धेरै। किनकि यो सम्पूर्ण क्यारिबियनमा सबैभन्दा पुरानो शहरहरू मध्ये एक हो। यसमा पर्खालले घेरिएको ऐतिहासिक केन्द्र र १६ औं शताब्दीका भवनहरू पनि छन्। साथै यस ठाउँमा तपाईंले पहिलो क्याथेड्रल र महलको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ जुन अमेरिकासँग थियो। कुनै आश्चर्य छैन कि यो एक विश्व सम्पदा स्थल हो
Punta Cana मा अभ्यास गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो गतिविधिहरु
प्रत्येक समुद्र तट क्षेत्रमा, जुन हामीले पहिले उल्लेख गरेझैं सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा छन्, तपाइँ सधैं घाममा नुहाउने वा नुहाउनुहुन्न। त्यसैले तपाईं सबैभन्दा विशेष गतिविधिहरूमा समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले डाइभिङ उल्लेख गरेका छौं तर हामी क्वाड वा घोडामा चढेर बलौटे क्षेत्रहरू भएर जान पनि बिर्सनुहुन्न। तपाईं थप के चाहनुहुन्छ? सायद क्षेत्र मा उड्न वा सर्फिङ अभ्यास गर्न सक्षम हुनु। निस्सन्देह, त्यहाँ प्रत्येक र प्रत्येक स्वादको लागि विकल्पहरू छन्। सपनाको बिदामा बाजी लगाउनुहोस् र आफ्नो जेबको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि पुन्टा काना उडान प्लस होटेल सँगै, एक प्याकमा जान सक्छ र तपाईंलाई राम्रो पिच बचत गर्न सक्छ। के हामी प्याक गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » पुन्टा कानाको तपाईंको यात्रामा गर्न र हेर्नको लागि आवश्यक चीजहरू